आलिया रणवीरको विवाहमा आउने पाहुनाको बन्यो यस्तो लिष्ट – Sandes Post
आलिया रणवीरको विवाहमा आउने पाहुनाको बन्यो यस्तो लिष्ट
April 11, 2022 847
एजेन्सी । आलिया भट्ट र रणवीर कपुरको विवाहको बारेमा एकपछि अर्को नयाँ नयाँ कुराहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । विवाह समारोह पछि, बलिउड जोडीले मुम्बईको ताज होटलमा भव्य रिसेप्शनको आयोजना गर्नेछन्। रिसेप्शनमा बलिउडका धेरै चर्चित सेलिब्रेटीहरूलाई आमन्त्रित गरिनेछ। विवाहमा उद्योगका धेरै व्यक्तिहरू आउने छैनन् र केही विशेष अतिथिहरू मात्र हुनेछन्। तर रिसेप्शनमा धेरै बलिउड सेलिब्रेटीहरू आउने सम्भावना छ।
कार्डहरू चाँडै वितरण सुरु हुनेछ
आलियाका भाइ राहुल भट्टले विवाहको समयमा बलिउड स्टारको उपस्थिति कम हुने खुलासा गरेका छन् । राहुलका अनुसार विवाह निकै नजिकका मानिसहरुबीच नै राखिएको हो । निजी विवाह रहनेछ। धेरै ठूला व्यक्तित्वहरू आउँदैनन्। परिवार र केही साथीहरू हुनेछन्। साथै रिसेप्शनमा बलिउड स्टारहरु पनि देखिनेछन् । यद्यपि यो जोडीले अहिलेसम्म कसैलाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको छैन। स्वागतका लागि निमन्त्रणा एक–दुई दिनमा वितरण हुन थाल्नेछ ।
रिसेप्शनमा सहभागी हुने गेस्ट लिस्टको कुरा गर्दा यसमा धेरै ठूला स्टार र जोडीका विशेष साथीहरु पनि आउनेछन् । दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, मनिष मल्होत्रा, करण जोहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जान्हवी कपूर, सिद्धार्थ रोय कपूर, कट्रिना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्चन, इम्तियाज अली, गौरी शिन्दे, अयान मुखर्जी जस्ता धेरै ठूला नाम सामेल छन्। यसमा अन्य नामहरू पनि थप्न सकिन्छ।
जोडीले हनिमुन यात्रा स्थगित गर्यो
स्वागतको मिति अप्रिल १७ राखिएको छ । यो भव्य स्वागत स्थल मुम्बईको ताजमहल प्यालेस हो। तपाईलाई बताउन दिनुहोस्, आलियाले यस भव्य रिसेप्शनमा उनका नजिकका साथी मनीष मल्होत्राले डिजाइन गरेको पोशाक लगाउनेछिन्। यस बाहेक, स्रोतका अनुसार जोडीले आफ्नो हनिमुन योजनालाई ढिलाइ गरिरहेका छन्। दुबैले यसको लागि तयारी गरेका थिए तर आ(आफ्नो कामको प्रतिबद्धताका कारण जोडीले आफ्नो हनिमुन यात्रा केही समयका लागि स्थगित गरेका छन् ।
Prevलाइसेन्सको नयाँ आवेदन खुल्यो
Nextधेरैपछी पुजा र आकाश एकसाथ, एक अर्काको पोल खोलाखोल । (हेर्नुस् भिडियो)
पल प्रकरणमा जोडिएकी जस्मिनले चालिन अर्को कदम
होटल, रेष्टुरेण्ट बिहान ७ बजेदेखि ९ः३० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने
दरबारजस्तो कोठामा यसरी बस्दारहेछन् पल , कोठाभरि यस्तो देखियो नाच्ने ठाउदेखि सुत्ने खाटसम्म , पल छुट्दै ? (हेर्नुस् भिडियो )
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य , कति पुग्यो त ? यस्तो छ मुल्य सुची..
पललाई न्याय पाउछ भन्दै रुदै गरिमा शर्मा मिडिया मा (4988)